नेपालका छोराछोरी मार्ने भन्दै अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन, कालो झण्डा देखाउदै भने - मडरर गो ब्याक [हेर्नुहोस् भिडियो] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»नेपालका छोराछोरी मार्ने भन्दै अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन, कालो झण्डा देखाउदै भने – मडरर गो ब्याक [हेर्नुहोस् भिडियो]
नेपालका छोराछोरी मार्ने भन्दै अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन, कालो झण्डा देखाउदै भने – मडरर गो ब्याक [हेर्नुहोस् भिडियो]
By पूजा बानियाँ on ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ११:३५ भिडियो
पिएनपिखबर, भक्तपुर। अमेरिकामा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको भिडियो बाहिरेको छ। अमेरिकाको टेक्सास पुगेका डा. भट्टराई विरुद्ध त्यहाँ रहेका नेपालीले कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
तत्कालीन माओवादीका नेता डा. भट्टराईलाई ‘हत्यारा’ भन्दै प्रदर्शनकारीले फर्किन माग गरेका थिए । उनीहरुले ‘मडरर गो ब्याक’ भन्दै नारा लगाए । उनीहरुले ‘नेपालका छोराछोरीलाई मार्ने, मडरर गो ब्याक’ भन्दै डा. भट्टराईलाई कालो झण्डा देखाएका थिए।
डिसी मेट्रो एरियाबाट टेक्सास गएका डा. भट्टराई र उनकी श्रीमती तथा नेतृ हिसिला यमी विरुद्ध तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
डा. भट्टराई गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका हुन् ।